AJA သည် IBC 2019 တွင် FS-Mini Frame Synchronizer ကိုစတင်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Aja IBC 2019 မှာ FS-Mini ကို Frame က synchronous လွှတ်တင်
Aja IBC 2019 မှာ FS-Mini ကို Frame က synchronous လွှတ်တင်
စက်ပစ္စည်းအရည်အသွေးမြင့် 3G-SDI ပေါင်းစပ်, HD နှိမ့်ချင့်နှင့်အတူနဲ့ SD ကဗီဒီယိုဘောင်ထပ်တူ, ကျစ်လစ်သိပ်သည်း Mini ကို-Converter သို့ Cross-ပြောင်းလဲခြင်း
အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်, IBC ညီလာခံ, 7.C25 (စက်တင်ဘာလ 13, 2019) ရပ် - ယနေ့ IBC 2019 မှာ Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ အဆိုပါမိတ်ဆက် FS-Mini ကိုထုတ်လုပ်မှု-သက်သေပြလုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်ခရီးဆောင် Mini ကို-Converter သို့ Aja ရဲ့ဦးဆောင် FS frame ကိုထပ်တူပြုခြင်းနည်းပညာ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသူအပေါင်းတို့ pack မှာအကြောင်း, အသစ်တစ်ခုထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကို utility ကိုဘောင်ထပ်တူပြုခြင်း။ FS-Mini ကို, အချိန်အခါမဟုတ် 3G-SDI ၏ Cross-ပြောင်းလဲခြင်း, ချ, frame ကိုထပ်တူထထောက်ခံပါသည် HD နဲ့ SD ဗီဒီယိုအားအချက်ပြ။
"ဖြစ်ရပ်များထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်မှထုတ်လုပ်မှု မှစ. ပညာရှင်များမကြာခဏသေးငယ်တဲ့ခြေရာနှင့်အတူပစ္စည်းတွေလိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီလိုအပ်ချက်ဖြေရှင်းရန်ဖို့ FS-Mini ကိုတညျဆောကျခငျြတနှင့်ယခုနှစ် IBC ပရိသတ်ကိုနှင့်အတူမျှဝေဖို့မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်" ဟု Nick Rashby, shared နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်, Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ.
FS-Mini ကိုအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦး 3G-SDI input ကိုနှင့် output ကိုအတူတို့သည်သူတို့အိမ်၌စံဗီဒီယိုကို formats တစ်ခုကျယ်ပြန့်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခွင့်ပြု, HDMI output ကိုများနှင့်တစ်ဦးနှစ်ဦး-ရုပ်သံလိုင်း RCA စတိုင်အသံ output ကို Mini ကို-Converter ။ အဆိုပါ device ကိုလည်းဒေသခံတစ်ဦးကိုကိုးကားသော့ခတ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပြီးအလွယ်တကူဒေသခံ DIP switches များသို့မဟုတ် USB နဲ့ Aja ရဲ့ Mini ကို-Config လျှောက်လွှာကနေတဆင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ရည်ညွှန်း input ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။
utility ပြင်ပရည်ညွှန်းဖို့အချိန် input ကိုအချက်ပြမှထပ်တူပြုခြင်း function ကိုဘောင်
bi-Level နှင့် tri-Level ကိုးကားများအတွက်ပံ့ပိုးမှု
အနိမ့်အောင်းနေချိန်အပြောင်းအလဲနဲ့, တဦးတည်း frame ရဲ့အမည်ခံဗီဒီယိုအားနှောင့်နှေး
အေးခဲ (input ကို signal ကိုအရှုံးပေါ်) အနက်ရောင်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးကောင်းသောဘောင်မှ
အရည်အသွေးမြင့်မား 10-bit မှာကဗီဒီယိုအပြောင်းအလဲနဲ့
525i, 625i, 720p, 1080i နှင့် 1080p SDI input ကိုအချက်ပြဘို့ပံ့ပိုးမှု
တပြိုင်နက်တည်း SDI နှင့် HDMI အကျိုးရလဒ်များ
3 များအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ utility သည် frame နှုန်းကိုကူးပြောင်း:2pulldown
နှိမ့်ချ, Up ကို, 3G-SDI အကြား Cross-ပြောင်းလဲခြင်း, HD နဲ့ SD ကဗီဒီယိုကို formats
AFD input ကိုထောက်လှမ်းဆင်း-ပြောင်းလဲထိန်းချုပ်မှု
တစ်ဦး DIP switch သည်သို့မဟုတ် USB နဲ့ Aja Mini ကို-Config ဆော့ဖျဝဲမှတဆင့်ရိုးရှင်းသော configuration များ
(ပါဝင်သည်) DWP-U-R1 တစ်လောကလုံး input ကို power supply
FS-Mini ကို $ 695 အမေရိကန် MSRP များအတွက် Aja ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများကွန်ရက်မှတဆင့်ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်လည်ပတ်: www.aja.com/products/fs-mini.
AJA Control Panel သည် KONA နှင့် Io သုံးစွဲသူများအား Adobe Premiere Pro HLG HDR ထူးခြားချက်များအားအလွယ်တကူရယူနိုင်သည် - စက်တင်ဘာလ 15, 2020
Immersive Design Studios သည်အဓိကရုဏ်းအားကစားပြိုင်ပွဲ၏ LCS Summer Split Broadcasts အတွက် Virtual Studio ကိုပေးသည် - စက်တင်ဘာလ 8, 2020
AVITENG သည် AJA Solutions ဖြင့်တူရကီ ATV Broadcast Network အတွက် Hybrid Baseband / IP Architecture ကိုအသုံးပြုသည် - သြဂုတ်လ 19, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor post ကိုထုတ်လုပ်မှု လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-13
ယခင်: Blackmagic ဒီဇိုင်းကြေညာချက်များ Videohub စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး Pro ကို
နောက်တစ်ခု: Aja IBC 2019 မှာနယူးopenGear®လိုက်ဖက်တဲ့ Card များကိုမိတ်ဆက်